Waxaan badalo karaa files HDV in MP4?
La mid ah si ay u AVCHD ee duubo-qeexidda sare (gaar u galay disc Blu-ray gubanaya); HDV sidoo kale waa duubo-qeexidda sare, laakiin waxaa markii hore loogu tala galay in lagu kaydiyo cajalad jirka ah. Si kastaba ha ahaatee, hadda waxaa sidoo kale la heli karo oo ah qaab warbaahinta file-saldhiga. Waxaa hubaal ah waa fududdahay in ay sameeyaan tafatir ama multiplexing dhex file warbaahinta halkii cajalad dhabta ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa ciyaaryahan ku haboon in geliyaan karo oo ciyaaro files HDV ah (sida caadiga ah ee MTS ama M2TS format), iskaba daa in wax ka bedel videos ah.
Waayo, macluumaad, Windows XP (taageero mar dambe ma ay noqon doontaa ka dib markii 8aad ee April, 2014) iyo Vista hadda ma taageeraan HDV video files aadan. Dhinaca kale, waxa kale oo aad leedahay lahaa dhibaatooyin isku dayayaan in ay geliyaan ama Radidiyaha aad HDV video files inkastoo qaabab file waxaa taageera Windows 7 iyo 8. Haddii abid ka dhaca, isku day in dhibta aad Windows Media Player. Haddii ay weli ma dhacaya idiin, waxaad isku dayi kartaa oo kaliya si loogu badalo files HDV ah. Dhinaca kale warka in, waxaan idin ​​kula talin lahaa ee Wondershare Video Converter Ultimate .
Fiiro gaar ah : ma awoodi doontid inaad aragto in kala duwanaanshaha u dhaxeeya MTS iyo M2TS qaabab file ilaa dil dhabta ah. Waxaan qabaa inay u badan tahay in aad ku badbaadin doonaa waqtiga isku dayayaan in ay baadhaan farqiga.
Waxa kale oo dheeraad ah oo la taaban karo oo ku habboon haddii aad badalo videos HDV in ay MP4, maxaa yeelay qaab file MP4 waa mid ka mid ah qaabab ugu doorbiday of wareejinta iyo ka aaladaha aad qaadi karo ka kombiyuutarka. Si fudud raac tallaabooyinka ku saabsan sida aad u bedeli karaan HDV in ay MP4. Ha welwelin ku saabsan tayada Tifaftirayaasha sida Video Converter Ultimate ah waxay maamushaa diinta la AAN tayada khasaaro.
1 Upload Dufcaddii
Dejinteeda files HDV in aad rabto in aad si loogu badalo gal software ah. Just jiidi--iyo hoos u badan video files sida aad jeceshahay sida Converter kulligood isku xirto doonaa hir on top of kasta oo kale. Fadlan riix Edit button inay sameeyaan tafatir kasta oo ka hor diinta files HDV in ay MP4.
Waxaad had iyo jeer dib ama baabi'in kartaa tafatir ah lagu sameeyaa haddii aadan ku qanacsanayn waxa la dibna mar kale dib u sameyn tan iyo bilowgii. Iyadoo kulanka xiisaha leh Output screen, isbeddel la isla eegi karaan.
Fiiro gaar ah : Haddii aad u baahan tahay goobaha dheeraad ah, riix Settings boxed iyo iftiimiyeen in casaan. Waxaad qabsato karaa heerka xoogaa ah, heerka jir iyo wax ka badan.
2 Beddelaan files HDV in ay MP4
The qaabab wax soo saarka oo ay taageerayaan waxaa loo kala saaraa ku salaysan jecel , Qaabka iyo Device . Haddii aadan heli karin qaabab file in aad u baahan tahay, guji magnifier iyo ka dibna ku qor ee Search sanduuqa.
Xaaladdan oo kale, dooro Video MP4 sida qaab wax soo saarka aad. Markaas ka hor tago oo badalo files HDV aad. Waxaa lagu wargelin doonaa marka ay dhamaystaan ​​fariin pop-up ah shaashadda kombuyuutarka aad.
3 mar walba oo Watch, meel kasta!
Sidii hore ee maqaalka ku xusan, diinta files HDV si aad u MP4 yimaado waxyaabo nolasha iyo waliba. Sida wareejinta faylasha MP4 ah qalabka aad mobile, aad surin-in karaa iyada oo si toos ah cable USB iyo jiidi aad files gediyay HDV gal kombuyuutarrada gacanta aad.
> Resource > Video > Sidee ayaan u bedeli karaan File HDV An Si MP4?